I-MS 2mm ifayibha yokusika umatshini wokusika
Amandla: 1500W Ubungakanani beTafile: 1500x3000mm Ukusika intloko: I-Raytool (i-autofocus) / i-WSX (i-autofocus) Umthombo weLaser: IPG (uphawu lwaseJamani) / uRaycus (uphawu lwaseChina) Isicelo: Umatshini wokusika weLaser ifayibha esetyenziswa ngokubanzi ekusetyenzisweni kwentsimbi yekhabhoni, insimbi isekhona, ingxubevange s ...
Ucingo For Laser Welding Machine
Ucingo lwe-0.8mm, 1.0mm, 1.2mm. 1.6mm Ukuba ubukhulu bezinto bungaphantsi kwe-1mm, umsantsa ophakathi kwamacandelo amabini kufuneka ubengaphantsi kwe-0.15mm Ukuba ubukhulu bephepha ngaphezulu kwe-1mm, umsantsa we-0.7mm wocingo lwe-1mm, umsantsa we-1.2mm, ubukhulu be-wire 1.6mmNgenxa yokuba izinto zibhityile, ukuba umsantsa mkhulu kakhulu, unyibilikile ...
I-FSCUT2000 Inkqubo yokusika yeLaser yaMandla aPhakathi
Inkqubo ye-FSCUT2000S yamandla aphakathi yokusika i-laser isisombululo esigcweleyo esine-open-loop system eyenzelwe ngokukodwa ishishini lesinyithi, enezinto ekulula ukuzifaka kunye nokulungisa, ukusebenza ngokugqwesileyo kunye nezisombululo ezidityaniswe ngokupheleleyo, yinguqulelo yokuphucula esuka kwi-FSCUT2000C. Faka isicelo ...
Amathemba ophuhliso kumzi mveliso we-laser wase China ngo-2021 abonisa iindlela ezintlanu eziphambili
Kwiminyaka yakutshanje, imakethi yezixhobo zelaser yase China igcine imeko yokukhula ngokuzinzileyo. Ngokwengqikelelo yeZiko lase China loPhando ngezoRhwebo, ithemba lophuhliso lwelizwe lam ngo-2021 liza kubonisa ezi zinto zilandelayo: umgaqo-nkqubo we-industri ...
Umahluko phakathi TIG Welding Kwaye Laser Welding
Ezona mpawu ziphambili ze-laser welding zi-deformation encinci kunye nokungena okungacacanga. Iimpawu zeargon arc kukuhamba ngamandla, ulawulo olungqongqo lwe-deformation, kunye nokungena okunzulu. Ukuziqhelanisa namalungu amancinci, aphakathi kunye ashinyeneyo, unokukhetha amandla e-argon arc arch ...
Indlela ukwahlula umgangatho sheet kunye nombhobho ifayibha laser ukusika umatshini
Njengomatshini wokulungisa osebenzayo, iphepha kunye nombhobho osetyenziselwa injongo yokusika ifayibha kusetyenziswa kakhulu ekusetyenzisweni nakwimveliso yeshishini. Nangona kunjalo, abantu abaninzi abawazi umgangatho wemveliso xa bekhetha ukuyisebenzisa, ke indlela yokugweba? Okulandelayo, iCheeron Laser iya ...
Emilonyeni kuzo zonke iintlobo laser ukusika intloko
Umbhobho-Usebenzisa ubhedu obukumgangatho ophezulu, indawo yokunyibilika iphezulu njenge-1083 ° C, ngobuninzi bombane kunye nokuqhutywa kwe-thermal, kunye neplastikhi ebalaseleyo. Siya kubonelela ngemilomo yazo zonke iintlobo laser ukusika intloko, WSX, Raytool, Precitec ukusika intloko, Quelle njalo njalo. Umaleko ongatshatanga nophindwe kabini ...
Ukuveliswa kwakhona kwemilingo kwinto eseleyo
Yintoni impindezelo ebonakalayo? Kukunceda njani? Yintoni enye onokuyenza? Yintoni impindezelo ebonakalayo? Ungathatha i-phohos yento eseleyo emva koko ungenise kwisoftware, kwaye uchonge izinto zokwenene ezishiyekileyo ngekhamera. Ngokusebenzisa isoftware kunye nokuhlela ukusika. Kukunceda njani? Gcina wena ...
Iziphumo zesantya kumgangatho wokusika
1. Iziphumo zesantya esikhawulezileyo kumgangatho wokusika: * Inokubangela ukungakwazi ukusika kunye neentlantsi ezitshizayo; * Ezinye iindawo zinokunqunyulwa, kodwa ezinye iindawo azinakunqunyulwa; * Yenza ukuba lonke icandelo lokusika libengqindilili, kodwa kukho amabala anyibilikayo; * Isantya sikhawuleze kakhulu, sibangela iphepha ukuba b ...
Yintoni ebangela ukuphambuka komatshini wokusika wefayibha laser kwinkqubo yokusika?
Ngophuhliso oluqhubekayo lwetekhnoloji yasekhaya, xa iinkampani ezininzi zisebenzisa oomatshini bokucheba i-fiber laser ekusebenzeni, abanakuphela ukugcina iindleko kodwa baphucule nokusebenza kwemveliso, kodwa zininzi izizathu zeempazamo kwinkqubo yokusika kunye neziphumo zokusika ezibi ngexesha .. .